फेसबुकमा स्टाटस राखेर किन युवाहरु आत्महत्या गर्छन् ? - Mitho Khabar
February 9, 2020 mithokhabarLeaveaComment on फेसबुकमा स्टाटस राखेर किन युवाहरु आत्महत्या गर्छन् ?
”अब मलाई पुग्यो । तिम्रै शरणमा परेँ लैजाउ …जय शम्भो ।”
उनले स्टाटसमा ‘शम्भो’ लेखेका कारण उनका साथीभाई र फेसबुक फ्रेण्डहरुले यो स्टाटसलाई सामान्य रुपमा लिए ।
”जीवन निराश छ, अब भेट नहुन पनि सक्छ यार गुड बाई ।”
रोएको, हा.. हा.., वा, ‘स्याडवाला’ ईमोजी र स्टिकरहरु ओईरो लागे ।
किनकी परिस्थितीले नयाँ मोड लियो अर्थात् उनले यो स्टाटस पोस्ट गरे र घर नजिकैको ‘खनायोको’ रुखमा आमाको सारीको पासोमा झुण्डिएर आत्महत्या गरे ।
”ह्वाट द हेल !”
एउटा तीतो र अस्वभाविक लाग्ने ‘ट्वीस्ट’ आयो ।
”मलाई बाँच्न पुग्यो ईश्वर ।”
नेपाल प्रहरीको ‘ईन्स्पेक्टर’ बन्ने सपना बोकेका अधिकारी प्रहरी निरीक्षक बन्ने ध्याउन्नमा लोक सेवाको क्लास लिन केही महिना राजधानी बसेका थिए ।
सविनाको प्रवेशिका परीक्षामा राज ‘गार्ड’ बसेका थिए ।
आफ्नो लाईफमा फिल्मी शैलीमा ‘सिंघम स्टाइलमा ईन्ट्रि’ मारेको कारण राजलाई आफ्नो मनको राजा सोच्थिन् सविना ।
‘राज कसैसँग नबोली घर लम्केको थियो’ देख्नेहरु भन्छन् ।
‘दुई हातले कपालमाथितिर फर्काउँदै लम्केको थियो ।’ राजका छिमेकी सुनाउँछन् ।
अहिले पनि राजको फेसबुक प्रोफाइल चेक गर्दा ‘ईन अ रिलेसनसिप विद सविना कुँवर’ छ ।
अनि स्टाटस उही पुरानै, ”फुल स्टप ।”
”मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो घरी घरी” ।
समाजमा जहिलेदेखि हामी आत्महत्याको घटना सुन्दै आएका छौं, त्यो समयदेखि नै मानिसले केही न केही क्लु ‘हिन्ट्सहरु’ छोडेर गएका हुन्छन् । सुसाईड नोट, भित्ते लेखन, कसैलाई प्रेषित गरेको चिठी, ऋणधनको जानकारी, हिसाबकिताब, मेलमिलाप गर्ने आदि ।
जीवनको अन्तिम घडीमा घुमिरहँदा अर्थात् आफ्ना ईच्छा आकांक्षा, सोच, सपना, उपलब्धिहरुलाई तिलाञ्जली दिइरहँदा उनीहरुको मनमा पश्चाताप, के गरुँ ? कसो गरुँ ? को आगो दन्किएको हुन्छ । आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक रुपमा वा हुनसक्छ मानसिक सन्तुलन गुमाईसकेको व्यक्ति अन्तिम भावना सार्वजनिक गरुँ भन्ने सोच बनाउँछ । समाजमा जहिलेदेखि हामी आत्महत्याको घटना सुन्दै आएका छौं, त्यो समयदेखि नै मानिसले केही न केही क्लु ‘हिन्ट्सहरु’ छोडेर गएका हुन्छन् । सुसाईड नोट, भित्ते लेखन, कसैलाई प्रेषित गरेको चिठी, ऋणधनको जानकारी, हिसाबकिताब, मेलमिलाप गर्ने आदि ।
मनोविद् बासु आचार्य थप्छन्, ”यतिसम्म कि कोही व्यक्ति आत्महत्या गर्ने समय नजिक हुँदा गल्तीको प्रयाश्चित स्वरुप माफीसमेत माग्छन् । आफ्ना महत्वपूर्ण सामग्रीहरु अरुलाई बाँड्छन् ।”
मनोविद्, प्रहरी, समाजशास्त्री, ‘काउन्सलर’ र विज्ञहरुको भनाइ यस्तो छ ।
परिवारमा कोही सदस्यले नयाँ तथा फरक लाग्ने अस्वभाविक लाग्ने सामान्य व्यवहार देखाएमा तत्काल मनोपरामर्शदाता वा ‘काउन्सिलर’ सँग सम्पर्क राख्नुपर्छ ।
जेसिबी चालकक’ले जि’उँ’दै पु’रे’र ग’रे वडाध्यक्ष’को ह’ त्या , कारण थाहा पाउँदा सबै’को हो’स् उ’ड्यो !
बिचरा ! यी गर्भवती महिलालाई बच्चा जन्मिने बेलामा पे’टमा ला’त्ती हा’नेर फरार भए श्रीमान् (भिडियो हेर्नुस्)